ငြမ်းစီမံကိန်း - ဒစ္စနေလန်းပန်းခြံ၊ ရှန်ဟိုင်း
Tomorrowland စီမံကိန်းသည်ပန်းခြံ၏အနောက်တောင်ဘက်ထောင့်တွင်တည်ရှိသည်။ စီစဉ်ထားသည့်ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်းပြီးစီးရန် MEP တပ်ဆင်စဉ်အတွင်း၌အတွင်းပိုင်းအခန်းကန့်နံရံကိုတစ်ချိန်တည်းဆောက်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ringlock လိမ်လည်မှုကိုလက်ခံ ...
ဖောက်သည်အတော်များများကကျွန်တော့်ကိုစံ၏ပစ္စည်းအကြောင်းမေးကြပါတယ်။ လက်စွပ်ဝယ်သောသူငယ်ချင်းများကမူစံ၏ပစ္စည်းရွေးချယ်ရာတွင် Q355 (Q345) ကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုရကြောင်းမသိကြပါ။ Q355 သံမဏိတံဆိပ်တုံးနှင့်အတူစံချိန်စံညွှန်းများစွာရှိသည်။ စျေးကွက်အတွင်းရှိသော်လည်း Q235 နှင့်ရောနှောထားသည်။
ရေဖန်ခွက် connector ၏စျေးနှုန်းသည်သဲသွယ်တန်းသော connector ၏ ၂ ဆဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မိတ်ဖက်များစွာသည်ရှုပ်ထွေးမှုကိုခံစားကြရလိမ့်မည်၊ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေဖန်ခွက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရွေးချယ်နေဆဲဖြစ်သည်။ လက်ရှိစျေးကွက်ထဲရှိသဲသိုင်းကြိုးဆက်သွယ်မှုပြproblemsနာများအကြောင်းပြောပြပါရစေ။ 01. ရုပ်ရည်ညံ့ဖျင်းခြင်း ...
Casting သည် Ringlock ငြမ်းတွဲဖက်ပစ္စည်းများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရည်အသွေးသည်ငြမ်း node ၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်လုံခြုံမှုနှင့်ငြမ်း၏လုပ်ငန်းသက်တမ်းကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ် ...
Ringlock Scaffolding ကိုအစီအစဉ်တကျစီတွင်တပ်ဆင်ပြီးဖျက်သိမ်းသင့်သည်။ လူအချို့ကစိုက်ထူမှုကိုအစီအစဉ်အတိုင်းပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်၊ ဖျက်သိမ်းသည့်အခါအရေးမကြီးပါ၊ အလွယ်တကူဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်အလေးပေးရန်လိုအပ်သည် ...
ငြမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏ 2021 Canton တရားမျှတသောတိုက်ရိုက်စီး
Rapid Scaffolding (Engineering) ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် 2021 Canton Fair Live Stream ၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် 04/15 / 2021-04 / 24/2021 တွင်ပါဝင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တဲသို့လာရောက်လည်ပတ်သည်။ Live stream ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်မှာ https://ex.cantonfair.org.cn/pc/en/exhibitor/4ab00000-005f-5254-eae3-08d7ed79f5d1/ Wuxi Rapid ...
သင်နှင့်အခြားသူများအတွက်လုံခြုံမှုရှိစေရန်ငြမ်းကိုအသုံးပြုခြင်း။ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုဆောက်လုပ်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောက်လုပ်ရန်အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်သည်။ ပလေတို ...
Huaji Machinery Manufacturing Co. , Ltd ၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ငှားရမ်းခြင်း
စက်ရုံသည် Jiangsu, Wuxi တွင်တည်ရှိသည်။ စက်ရုံကိုနှစ်ပိုင်းခွဲခြားသည်။ ထုတ်လုပ်မှုအလုပ်ရုံနှင့်ရုံးအဆောက်အအုံဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုအလုပ်ရုံ၏ပထမထပ်၏အမြင့်မှာ ၁၀.၉၅ မီတာဖြစ်သည်။ ရုံးအဆောက်အအုံ၏ကုန်းမြင့်မြင့်မြင့် ၁၆.၅ မီတာရှိသည်။ ... အဘို့အ formwork ထောက်ခံမှုစနစ်၏အမြင့်
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိစက်မှုလုပ်ငန်းတိုင်းသည် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။ သစ်ခုတ်သမားများ၊ အတွေ့အကြုံရှိသူများနှင့်အတွေ့အကြုံများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ငြမ်းသမားများ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအဆင့်တိုင်းတွင်သင်တန်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ လက်ရှိအခြေအနေများက ...